Mandà izany i Buchanan, fa mety ho Banksy izany? | Famoronana an-tserasera
Iray amin'ireo zava-miafina lehibe indrindra atrehantsika ankehitriny eo amin'ny tontolon'ny zavakanto fantaro hoe iza no ao ambadiky ny Banksy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, iza ny anarana sy ny anaram-bosotra an'ity artista ity izay nianjera tamin'ity andro ity fa Neil Buchanan avy amin'ny Art Attack.
Ary na dia mitovy aza Tonga mialoha i Buchanan handà ny tsaho toy izany, azo antoka, ary avy amin'ny zavatra nianarantsika tato anatin'izay taona lasa izay, dia tsy nivoaka i Banksy hanambara izany. Angamba mijanona miaraka amin'ilay mistery aza isika tahaka ny niseho tamin'ireo solon'anarana taonjato maro lasa izay ary fomba "miafina" io.
Tsy maninona i Neil Buchanan fantatra any Angletera tamin'ny fanolorany ny Art Attack. Ary ny tena hevitra hoe i Buchanan mihitsy no mivoaka handà izany dia mitarika ny maro hanontany tena fa tsy hiteny imasom-bahoaka mihitsy i Banksy fa mitovy izy. Mora azo izany.
Ho an'ireo rehetra miahiahy ny teoria fa Banksy no Art Attack's Neil Buchanan, azafady ampahatsiahiviko fa Neil dia efa niaina fiainana roa heny tamin'ny taona 90 toy ny Smarty Arty tao amin'ny Zzzap! pic.twitter.com/JwiISMhpB9
- Tom Hourigan (@TomHourigan) Septambra 7, 2020
Raha mandeha amin'ny talenta an'ny Buchanan tamin'ny taona 90 dia mety ho tonga lafatra amin'ny fampiasana tsara ny hafatra an-tsary nataon'i Banksy ary mety amin'ny taona manaraka; Tokony ho tsapanao fa tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa i Banksy rehefa nanjary olo-malaza izy, saingy talohan'ny nandanian'izy ireo taona maro tamin'ny zava-kantony teny an-dalambe.
Zanaka bitsika maro no nifandray tamin'ity andro ity tamin'i Buchanan ary ny ahiahiny mety ho ao ambadiky ny Banksy. Azo antoka fa haharitra amintsika ny fotoana hahitana azy; indrindra rehefa rehefa hitantsika tao amin'ny London Underground manao ny zavatra ataon'izy ireo volana vitsivitsy lasa izay; na ity fomba fijery hafa amin'ny fahitana inona ity inona ny fidiovana tamin'ny areti-mandringana ankehitriny velona isika.
Na izany aza, tavela amin'ny zava-miafina isika ary izany dia manome rivotra manokana ho an'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny Banksy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mety i Banksy Neil Buchanan avy amin'ny Art Attack?